"Together We Stand , Divided We Fall"
- "Together We Stand , Divided We Fall" जुटे हामी उठ्छौ, फुटे हामी खस्छौ । हामीलाई खस्नु छैन । हामीलाई अझ धेरै माथी उठ्नु छ । हामीलाई समृद्द सल्यान चाहिएको छ , नकी गुमनाम `सल्यान´ !!
यदी हामी अहिले पनि जागेनौ भने हाम्रा सन्ततीहरुले पनि पछि सानसंग म सल्यानी हु भनेर भन्न सक्ने छैनन । हाम्रो जिल्ला (हाम्री आमा) र पछीको पिढीको निम्ति आउनुहोस समस्त महानुभावहरु , हामिले सल्यानलाई बनाएर देखाइदिऔ !! सबै मिलि जिल्ला बिकास गर्दै छन रे है भनेर देशै भरी सन्देश दिदिऔ ।